Benifits – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
September 17, 2010 by ကုမ်ရာသီသူ
ထွေရာလေးပါး – ၁
အသံတိတ်နေမိတာ အတော်ကြာသွားသည်နှင့် တူ၏ ။ စိတ်ထဲက ယားကျိယားကျိ အတော် ပြင်းထန်လာသည်။ ဘယ်အကြောင်းအရာက စရပါမည်နည်း။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မျက်နှာ စာအုပ်ကြီးမှာ လယ်စိုက်၊ ဒမြတိုက်နေရသည်က အတော် ငြိမ်းချမ်းသည်။ ဖတ်ချင်သည့် ဘလော့တွေ၊ သူများရှယ်သမျှ အကြောင်းအရာတွေ လျှောက်ဖတ်ရင်း ညောင်းလာလျှင် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ခွေနေနိုင်သည်။ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဆတ်ဆော့မိတော့ သူများ ဧည့်ခန်းတွေ ဝင်ထိုင်မိပါ၏။ “အဲဒီမှာ စ,တွေ့တာပဲ”
အင်တာနက် စသုံးတတ်ခါစ လွန်ခဲ့သော ၅နှစ် ၆နှစ်ခန့်က သူများတွေ ချက်ပြုတ်နေကြသည်ကို မြင်တွေ့ရစဉ် “စွဲတတ်တယ်ထင်ပါရဲ့” – ပေါ့ပေါ့ပဲ တွေးမိသည်။ ဘာတွေ ပြောကြ၍ ဘယ်သို့ စွဲကြသည် မသိ၊ မစဉ်းစားတတ်။ တစ်ခါတစ်ရံ လူသုံးများသော အင်တာနက်ဆိုင်မှာ “စက်မအားသေးဘူး အမရေ” ဆိုလျှင်တော့ စိတ်ထဲက ခိုးလိုးခုလု ဖြစ်မိသည်မှာ ထိုင်ရာမထတမ်း ချက်ပြုတ်အားကောင်းလှသည့် သူများကို။
အသက်ကြီးမှ အ,သုံးလုံး သင်သလိုတော့ အင်တာနက်သုံးနည်း မသင်ခဲ့ရပါ။ ငယ်ကတည်းက ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်နှင့် ဖက်မွေးလာခြင်း မဟုတ်သည့်အတိုင်း စ,သုံးသုံးချင်း အနည်းငယ်တော့ စိမ်းပါသည်။ သို့ဖြင့် အင်တာနက်ဆိုင်တွင် လူရှင်းသော အချိန်များကို မေးကာ သွားတတ်လာသည်။ ပြီးတော့ သူများတကာကို မေးမြန်းကာ ဂူးဂဲလ်ကြီးကို နည်းနည်းပါးပါး တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့် ရှာဖွေမိလာသည်။ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဟိုဟိုသည်သည် လည်ပတ်တတ်လာသည်။ အဲသည့်အချိန်များမှာ ခေတ်စားသည်က Zorpia Journal။ ဘာမှန်းရေရေရာရာ မသိလိုက်ဘဲ အကောင့်တစ်ခုတော့ ပိုင်ဖူးသည်။ သူများတွေ ချက်ပြုတ်ကြချိန် ရှာစရာ ဖွေစရာ တစ်ပုံကြီး ရှိနေတတ်သူ တစ်ယောက်အဖို့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ဧည့်ခန်းများပင် ဝင်မထိုင်ခဲ့ရစဖူး။
မကြာသေးမီက ဟိုဟိုသည်သည် လျှောက်သွားရင်း မြန်မာစာနှင့် ချက်ကြသော ဧည့်ခန်းလေးတစ်ခုကို သတိပြုမိသွားပါ၏။ ၀င်ပေါက်မှ ငေးကြည့်နေရင်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာ နောက်ကြ၊ ပြောင်ကြ၊ ထိုင်စကားပြောသူများ ပြောကြ၊ ဆိုကြသည်ကို သဘောကျမိသေးတော့သည်။ မိန်းကလေး၊ ယောကျာင်္းလေး မှန်းဆကြည့်၊ ပြောဟန် လေသံအရ အသက်အရွယ် မှန်းဆကြည့်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နေပုံထိုင်ပုံ၊ စိတ်သဘောထားပုံတို့ကို မှန်းဆကြည့် နှင့် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းသား။ ခင်သန္တာ သက်ချိုပြုံးတို့၏ နုနွဲ့သော စိတ်သဘောထား၊ အတောင် ၂၀ ဝတ် ကိုကိုတို့၏ ပုဆိုးစွန်တောင်ဆွဲကြသော အတင်းပြောပုံများ၊ သွယ်သွယ်ပျောင်းသော မယ်ဖော့ဖယောင်းတို့ စကား ဗလ ပြကြပုံများကဖြင့် အံ့ဩကုန်နိုင်ဖွယ်။
တစ်ခါတစ်ခါတော့ သူရို့ဧည့်ခန်းကလေးမှာ မိန်းကလေးတို့ဖြင့် ကျွက်ကျွက်စီနေတတ်သည်။ သည်ကြားထဲက ကမ္ဘာပတ်နေကြသော ကာလသားများဖြင့်လည်း ဆဲဆိုသံတွေ ညံတတ်ပြန်သေးသည်။ ထိုသို့ ဆဲဆိုနေကြစဉ်တော့ ရှိသမျှ မိန်းကလေးတွေ “အမယ်လေး” အော်ကာ ထွက်ပြေးနေကြတတ်ပါ၏။ သည်လို အချိန်မျိုးတွင် အခန်းပြင်မှာ ရပ်ငေးနေကြည့်မိရင်းက လှည့်ပြန်ခဲ့ဖြစ်တော့သည်။
ရှားပါးလှသော တစ်ရံတစ်ခါတွင်တော့ မိန်းကလေးများ တွတ်ထိုးနေသည်ကို အလကားနေရင်း ထိပ်ပုတ် ခေါင်းပုတ် လုပ်နေသော (လေနှင့်) ထိပ်ပြောင်ကြီးများကို တွေ့ရပြန်လေသည်။ ကိုယ့်မှာ အိမ်ထောင်ရက်သားရှိပြီးသား (ရှိသော်လည်း မရှိသယောင် သဘောထားနေခြင်း) ဖြစ်ပါသော်လည်း နေရာတကာတွင် သူတို့ ကြည့်နေကျ (၁၈နှစ်အောက် မကြည့်ရ) ရုပ်ရှင်မှ မိန်းကလေးများကို မြင်ယောင်နေကြသူများသာတည်း။ ဤသို့လျှင် ဘာကိုယ်ကျင့်ရေးရာမှ ဂရုစိုက်စရာ မထင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်လေရကား ……… ထိုထိုသော ရုပ်ရှင်ကားများမှ စကားလုံးများ၊ အပြုအမူများကို ဧည့်ခန်းထဲသို့ ပြောင်ပြောင်ကြီး သယ်ဆောင်ကျင့်သုံးကြသည်မှာ မသတီစရာကောင်းလှဘိတောင်း။
အင်း……………… ဒေါ်မာမာအေးက ဘီဘီစီမှာ အစီအစဉ်နာမည်ပေးသလို “ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးကျန်သေးတယ်”ဟုပင် ပြောရမည်ထင်သည်။
Posted in ဟိုဟိုဒီဒီ	| Tagged Benifits, Development, Entertainment, wind | 1 Comment
August 23, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
စလုံးကို ရောက်ခါစကတော့ လျှောက်လွှာအတန်တန် မလို၊ ကံစမ်းမဲ စောင့်စရာမလို၊ သူများဆီကနေ ပွဲစားနဲ့ ၀ယ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ်ပိုင် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းတစ်လုံး လွယ်လွယ်ကူကူ ရတာ အတော် ပျော်သား။ အလုပ်လျှောက်ရင် သုံးဖို့ဆိုပြီး ဒီမှာရှိတဲ့ အကိုတစ်ယောက်က SingTel Prepaid ကဒ်လေး တစ်ကဒ် ၀ယ်ထားပေးတယ်။ မူရင်း တန်ဖိုးကတော့ S$ 8 ပဲ ပါပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုလူ၊ ဒီလူ မေးမြန်းပြီး ဘယ်ဟာကို ထပ်ဖြည့်ရင် ဘယ်လောက် အသုံးခံတယ်၊ ဘယ်လိုင်းကမှ တန်တာ စသည်ဖြင့် ပြောကြတော့ နားဝေတိမ်တောင်ပေါ့။ ကိုယ့်ဆီမှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး တစ်နေရာတည်းက ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ ပြိုင်ဖက်မရှိတာ အတော် ရွေးချယ်ရ သက်သာတာပဲ။ အပြိုင်အဆိုင် Promotion တွေများ ပေးလိုက်ကြပုံ ၊ ကိုယ်သာ အာညောင်း/ နားညောင်းခံနိုင်ရင် အလကားပဲ သုံးရတော့မလို။
စကာင်္ပူမှာ Mobile Service ပေးတာ အဓိက ပြိုင်ဖက် လုပ်ငန်းကြီး ၃ ခု ရှိပါတယ်။ SingTel, StarHub နဲ့ M1 လို့ လူသိများတဲ့ Mobile One တို့ပါ။ အဲဒီ ၃ ခုစလုံးက Prepaid Service နဲ့ Subscription Service တွေအပြင် Broadband Internet Service လည်း ပေးပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အမှီပြုပြီးသကာလ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေ ဖုန်းကလေးတွေ ဆက်ကြဖို့ International Calling Card တွေလည်း အပြိုင်းအရိုင်းပါပဲ။ လိုင်းဖုန်းတစ်လုံးကို မှတ်ပုံတင်ပြီး သုံးမယ်ဆိုရင် အ၀င်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး Text Message အရေအတွက်တစ်ခုအထိ အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်တာ Service အားလုံးရဲ့ အခြေခံ တူညီချက်ပါ။ ဒီလို လိုင်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ လစဉ်ငွေသွင်းရတာ ကိုယ်လို အလုပ်ရှာဖို့ ရောက်လာခါစ သူများအတွက် အကျုံးမ၀င်ပါဘူး။ ကိုယ်လို အထွက်ဖုန်း အခေါ်များသူတွေအတွက် Incoming Free Service က အလဟဿပါပဲ။ နောက်ပြီး အိမ်နဲ့၊ မိသားစုနဲ့ ဖုန်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်း Incoming Free ရသူတွေလို Call Back Service သုံးလို့အဆင်မပြေပြန်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု တွေအတွက် Mobile Service Provider တွေရဲ့ ဈေးဖြတ်မှုက အတော် မြင့်ပါတယ်။ တခြား Service တွေက ထုတ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ ပြန်ခေါ် (အ၀င်ခေါ်ဆိုမှုသီးသန့်) ခေါ်ဆိုမှုဆိုတာမျိုးတွေက အများကြီးပိုပြီး တွက်ခြေကိုက်သလိုပါပဲ။ သူတို့ဆီက Prepaid/ Subscription Service နဲ့ တွဲပြီး သူတို့ထုတ်တဲ့ International Calling Card တွေကို သုံးမယ်ဆိုရင် Bonus တစ်မျိုးမျိုး ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီ Bonus တွေထက် တခြား Service တွေက ပို တန်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်မိတာ ဒီလိုပါ။
SingTel ကနေ International Calling ကို ရည်ရွယ်ပြီး Hello! ကို ထုတ်ပါတယ်။ M1 ပံ့ပိုးတာက အများသိပြီးသား 1818 ပါ။ StarHub ကတော့ အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားအလုပ်သမားတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး India Calling Card ထုတ်ပါတယ်။ Service တွေကို သီးသန့် မသုံးပဲ 1818 သုံးပြီး StarHub လိုင်းသမားက ပြောမယ်ဆိုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် M1 ဖုန်းလိုင်းပိုင်ရှင်ကသာ 1818သုံးထားမယ်ဆိုရင် အဲဒီကဒ်သုံး ခေါ်ဆိုမှုကို Discount ခံစားခွင့်ရမှာပါ။ SingTel Prepaid ကဒ်ဖုန်းကို သုံးပြီး 1818 ကိုသာ ခေါ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိပြီးသား Main Account/ International SMS or Calling Account တွေကနေပါ ဖြတ်သွားတာ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။
စကာင်္ပူကို အလုပ်လာရှာသူ အတော်များများဟာ ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနာမည်တွေနဲ့ မစိမ်းကြပါဘူး။ သို့သော်………….. ကိုယ်သုံးစွဲနေတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုက ဘယ်လို အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ချက်ချင်းမသိကြပါ။ လတ်တလော ကိုယ်နေတဲ့ အိမ်က အင်တာနက် ချိတ်ပြီးသားမို့ ဖုန်းလိုင်းကို အထွက်ခေါ်ဆိုမှု အခမဲ့ဖြစ်နေရင် တော်ရဲ့၊ မဟုတ်လို့ကတော့ Prepaid တွေကို လုပ်ကျွေးရတော့တာပါပဲ။
အလုပ်ရပြီးပြန်တော့ လိုင်းဖုန်းစာချုပ်ချုပ်မလားဆိုတာ စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ StarHub လိုင်းကို Depandent Subscription လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးစကားတွေမှာ နားထွေးပြီး ဘေလ် လာမှ ခံလိုက်ရတာကတော့ Free Subscription ဆိုတဲ့စကားပါ။ လိုင်း Subscription Fees ၂၄ ဒေါ်လာကျော် ကျသင့်ပါသတဲ့။ ပြီးတော့ တစ်လကို မိနစ် ၈၀ အခမဲ့ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုကလည်း သာကြောင်းမာကြောင်း သူငယ်ချင်းချင်းပြောတာတောင် ကိုယ့် ပွါးနှုန်းနဲ့ မကိုက်ပြန်။ Call Back ကဒ်တွေ သုံးရင် အကုန်လုံး အ၀င်ခေါ်ဆိုမှုတွေချည်းပဲမို့ တန်သလိုထင်ရပေမယ့် ဖုန်းနံပါတ်ကို Handset ထဲက Contact list မှာပဲ သိမ်းပြီး ခေါင်းထဲ မသိမ်းတတ်တဲ့ ကိုယ့်အတွက် အဆင်မပြေလှ။ ဒီကြားထဲ တစ်ဖက်က ဖုန်းဖြေမယ့်သူကလည်း Unknown/ Withheld/ လိုင်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ၀င်လာတာဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကပဲလား၊ Pfingo နဲ့ ခေါ်နေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်အသိမိတ်ဆွေထဲကများ Call Back သုံးသေးလဲဆိုပြီး တော်လှန်ရေးသတိနဲ့ ဖုန်းဖြေရရှာပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖုန်းခေါ်ကဒ်တွေနဲ့ အဆင်တပြေများ ခေါ်လို့မရခဲ့ရင် အိမ်ကို စိတ်ကြီးပြီး တိုက်ရိုက်ခေါ်လိုက်မိလို့ကတော့ မြွေကိုက်နည်းတစ်နည်းပါ။ လကုန်လို့ ဖုန်းဘေလ်မြင်ရင် ရင်ဖိပြီး ကြည့်ရပါလေရော။ ကိုင်း… ရှိစေတော့ဆိုပြီး ဖုန်းပျောက်သွားတာနဲ့ ရောပြီး လိုင်းကိုပါ cancel လိုက်ရပါတယ်။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှာ M1 လိုင်းတစ်လိုင်း ပိုနေတယ်ဆိုတာနဲ့ လိုင်းဖုန်းကို စိတ်မကုန့်တစ်ကုန်ဖြစ်နေတာနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်သွားတဲ့အခါ M1 ကို သုံးဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ 1818 ခေါ်တဲ့အခါ အဆင်ပြေတာလေးတစ်ခု ပိုလာပေမယ့် သူဟာလေ ထိုနည်း၎င်း… ထိုနည်း၎င်း ဖြစ်လေတော့ စိတ်လျှော့ပြီး အလုပ်လျှောက်စဉ်ကတည်းက စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ SingTel Prepaid ဖုန်းကလေးပဲ ပြန်သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပင်မအကောင့်မှာ ငွေလက်ကျန် ပြားစွန်းလောက်ပဲ ကျန်တော့တာ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံရပ်ခြား ခေါ်ဆိုမှုတွေအတွက်လည်း International Calling Card တွေကို သူ့ Service နဲ့ သူ ရွေးချယ် သုံးစွဲရင် ပြည်တွင်း ခေါ်ဆိုမှုအဖြစ် ဖြတ်သွားတာကြောင့်ပါ။ ဥပမာ – M1 အတွက် 1818 တို့၊ StarHub အတွက် Call Back ကဒ်တွေနဲ့ SingTel အတွက် Sealion/Butterfly/SMS ကဒ်တွေသုံးတာမျိုးပေါ့။ Prepaid Service တွေမှာ StarHub အတွက် Happy 128 တို့၊ M1 အတွက် Super Top-Up တို့၊ SingTel က Hot 128 တို့ဟာ ပုံမှန် ၂၆ ဒေါ်လာလောက်ပဲ ကျသင့်ပြီး နိုင်ငံရပ်ခြား ခေါ်ဆိုမှုအတွက် ၂၈ ဒေါ်လာဖိုးနဲ့ ပြည်တွင်းအတွက် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖိုး ပါဝင်ပါတယ်။ တောက်လျှောက်သုံးလာတာ ၃ လကျော်ရင် တစ်ကြိမ် တန်ဖိုး ထပ်ဖြည့်တိုင်း ပင်မအကောင့်ကို ၁ဒေါ်လာကျော် ထပ်ဆောင်း ပေါင်းထည့်ပေးပါသေးတယ်။ တစ်ကြိမ် တန်ဖိုး ဖြည့်လိုက်ရင် ၄၅ ရက် (သို့) ရက် ၅၀ သက်တမ်း ရှိပါတယ်။ သက်တမ်းမကုန်ခင် ပွါးနှုန်းကြောင့် စာရင်းကုန်သွားခဲ့ရင်တော့ ကိုယ့်ဝါယောနဲ့ကိုယ် ဖြည့်ရုံပေါ့။ ပွါးနှုန်းနည်းလို့ သက်တမ်းကုန်ပြီးသည့်တိုင် စာရင်းထဲမှာ ကျန်နေသေးရင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖြည့်တဲ့အခါ လက်ကျန်နဲ့ ပေါင်းထည့်သွားပါတယ်။ ကိုယ့်လို ပျမ်းမျှ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လစဉ် ဖုန်းခ (နိုင်ငံရပ်ခြား ခေါ်ဆိုမှု အပါအ၀င်) ၄၀ ကနေ ၅၀ ဒေါ်လာလောက်ပဲ ကျသင့်ပါတော့တယ်။
ဒီလို Prepaid Service ကို သုံးစွဲသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ Media Message တွေ ပို့လို့/ လက်ခံလို့မရတာ၊ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်း ကလိလို့မရတာ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ကြိုက်တဲ့အချိန် တိုက်ရိုက် ခေါ်လို့မရတာတော့ အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ တခါတလေကျ ဖုန်းကဒ်တွေအကုန်လုံး သုံးလို့ အဆင်မပြေဘဲ တိုက်ရိုက်ခေါ်မှ ရသွားတဲ့ အခါမျိုး၊ ကိုယ်ကလည်း အရေးတကြီး ခေါ်ဖို့လိုနေ၊ ပင်မအကောင့်ထဲမှာ ပိုက်ပိုက် မကျန်တော့ဘူးဆိုရင်တော့………. ကိုယ်တွေ့ဖြေရှင်းနည်းလေး ပြောပြပါ့မယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ လိုင်းဖုန်းကို ခဏငှါးပြီး ပြောစရာရှိတာကို လို၊ တို၊ ရှင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ လကုန်လို့ ဖုန်းဘေလ် ထွက်လာတဲ့အခါ အဲဒီ Overseas Call အတွက် သူ့ကို ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေဖို့တော့ လိုတာပေါ့ နော်… 😛
ကုမ္ပဏီက ဖုန်းခကို ပမာဏတစ်ခုထိ ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးထားတဲ့ သူများကျပြန်တော့ Private Call တွေအတွက် အနည်းနဲ့ အများ ငဲ့ညှာစရာ ဖြစ်လာပြန်ပါရော။ ဒီတော့ Prepaid ဖုန်းတစ်လုံးကို Private သီးသန့်လိုမျိုး သုံးဖို့ တွန်းအားတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့တွေအတွက်တော့ ဖုန်းဘေလ်က အကြောင်းမဟုတ်ဘဲ Privacy ကသာ အကြောင်းပါ။ အစက ကိုယ်လို ဘတ်ဂျက်သမားတွေပဲ Prepaid Customer တွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတာ ဒီလိုအကြောင်းတွေလည်း ရှိတာပါပဲ။
အဲ………. ဒါပေမယ့် ချစ်ကြ၊ ခင်ကြ၊ ကြင်နာကြလို့ ဖုန်းခလေးတောင် တွန့်တိုနေရသလားလို့ မေးမယ့်သူများအတွက်တော့ …….. `အချစ်လေး… ကိုယ့်ကို ၅၀ (US$) ပေးပါကလေးရယ်´ 😛
Posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ	| Tagged Benifits, Dilemma | 1 Comment
May 18, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
လူမှန် နေရာမှန် ?
Once you see this Ads, you’ll see the exact message of agency. (picture credited to RogerS)
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီတစ်ခုက ကြော်ငြာလိုက်တာ hit the bull’s eye လို့ ပြောရလောက်အောင် ထိပါတယ်။ တကယ်သာ အဲဒီ အလယ်လူလို ဘ၀မျိုးဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ အတော် ဆိုးတဲ့ ဘ၀ပါပဲ။ တခြား အခြေအနေမှာသာဆိုရင် အဲဒီ အလယ်လူအတွက် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နိုင်မယ့် အလားအလာ ရှိပါသေးတယ်။ သူကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ လုပ်လို့ မရနိုင်တာတွေတောင် ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် အလုပ်လုပ်ကြရာမှာ Doing Things Right နဲ့ Doing Right Things ဆိုပြီး ရှိပါသတဲ့။ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ လုပ်စရာရှိတာကို အတတ်နိုင်ဆုံး မှန်ကန်အောင် Doing Things Right နဲ့ နေနေတာ အတော်ကြာသွားပြီဆိုတော့ လူက နည်းနည်း ပျင်းလာတယ်။ ဆိုကြပါစို့။ ဒီအလုပ်ကို တခြားလူ ရောက်လာမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလောက်တော့ မှန်ကန်အောင် လုပ်နိုင်မယ် မဟုတ်လား။ ဒါမှမဟုတ်၊ ကိုယ် ဒီမျှမက လုပ်နိုင်နေပါလျက်နဲ့ အခြေအနေက ဒီလောက်ပဲ ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်နေတာတွေကတော့ Doing Things Right ပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက် သင့်တော်တဲ့ နေရာမှန်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ တွေးမိလာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗဟိုပြုပြီး စဉ်းစားတဲ့အခါ ကမ္ဘာကြီးကလည်း ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဖြစ်သွားပါတယ်။ (ကိုယ် ဘယ်လောက် အသိုင်းအ၀ိုင်း ကျယ်ကျယ်ကို တွေးသလဲ။ တွေးသလောက် ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကမ္ဘာ ဖြစ်လာမှာပဲကိုး) အဲဒီ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းလေးထဲမှာ ကိုယ်ဟာ မရှိမဖြစ်၊ အရေးအပါဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမှာမို့ Doing Right Things ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ဒါလည်း စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရမယ့် Right Things တွေဟာ ကွဲလွဲမှုလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ခုထိ ကျွန်မရေးပြီးသမျှမှာ ပြန်ရချက်နဲ့ တွက်ကြည့်တာ မပါသေးပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ၊ စွမ်းရည်နဲ့ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝပဲ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နေတာပါ။ ကိုယ်စိုက်ထုတ်ထားတဲ့ အင်အား၊ အချိန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက် ပြန်ရချက်ကိုပါ ထည့်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Doing Right Things မှာ Criteria တွေ တိုးလာပါမယ်။ Doing Things Right ကတော့ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Doing Things Right က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး နဲ့ ပိုဆက်နွယ်ပြီး Doing Right Things ကတော့ ကျင့်ဝတ်ပိုင်း၊ သဘောထားခံယူမှုအပိုင်းတွေနဲ့ ပိုနီးစပ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒါကတော့ Peter Drucker ရဲ့ အဆိုအမိန့်တစ်ခုပါ။ Management is doing things right; leadership is doing the right things. သူကတော့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကိုပဲ ပြောသွားတာပါ။ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါ `ဘာလုပ်လုပ် မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်´ ဆိုတာနဲ့ `မှန်တာပဲလုပ်´ဆိုတာ အမြဲတမ်းညှိနေရမယ့် ဒွိဟတစ်မျိုး ဖြစ်နေမှာပါပဲ။
(အဲဒါ Life-and-live မှာ ရေးဖြစ်ထားတဲ့ စာလေးပါ။ Draft ဘ၀မှာ ကာလအတော်ကြာ နေရရှာတဲ့ ပို့စ်လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား ဆေးပညာအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ IT Field နဲ့ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ စာတမ်းတွေမှာလည်း လိုက်ရှာ ဖတ်ကြည့်နေခဲ့တာကြောင့်ပါ။ ပို့စ် အပြီးသတ်တော့ ရက်စွဲက စရေးခဲ့တာရဲ့ တစ်လကျော်သွားပါပြီ။ ကျွန်မ ယုံကြည်မိပါသေးတယ်။ လွတ်လပ်မှုဆိုတာကို ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာလည်း တာဝန်ရှိမှု၊ တာဝန်သိမှုဆိုတာတွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး Right Things တွေကို ရွေးချယ်ဖြစ်ကြမယ်လို့ ။)
Posted in ဟိုဟိုဒီဒီ	| Tagged Benifits, co-operative, individualism, strength | 10 Comments